အဖွဈမြားတဲ့ ခေါငျးကိုကျခွငျး ဝဒေနာ (၃) မြိုး | Dr Myanmar | Myanmar Medical Website
အဖွဈမြားတဲ့ ခေါငျးကိုကျခွငျး ဝဒေနာ (၃) မြိုး
မနကျဖွနျ စာမေးပှဲ ရှိတယျ ... ညဘကျထိ စာတှမေရသေးဘူး ... ခေါငျးတှတေောငျ ထိုးကိုကျလာပွီ။ ဒီလို စိတျဖိစီးမှုတှေ မြားပွားလာတဲ့အခြိနျမှာ ခေါငျးထဲက ထိုးကိုကျလာတတျတယျဆိုပါက သငျတဈယောကျတညျး မဟုတျပါဘူး။
ဒါဆို စိတျဖိစီးမှုနဲ့ ခေါငျးကိုကျခွငျးက ဆကျစပျမှုရှိလသေလား? ခေါငျးကိုကျခွငျးအားလုံးကကော စိတျဖိစီးမှုကွောငျ့သာ ဖွဈပျေါတတျလားဆိုတာကို သိရှိခငျြကွမယျ ထငျပါတယျ။ ဒါကွောငျ့ အဖွဈမြားတဲ့ ခေါငျးကိုကျခွငျး (၃) မြိုးကို ဖျောပွပေးလိုကျပါတယျ။
1. ခေါငျးတဈခွမျးကိုကျခွငျး (Migraine Headaches)
ခေါငျးတဈခွမျးကိုကျခွငျးကွောငျ့ အလှနျပွငျးထနျသော ခေါငျးကိုကျဝဒေနာကို ၄ နာရီကနေ ၇၂ နာရီလောကျ ခံစားရနိုငျပါတယျ။ မြားသောအားဖွငျ့ ခေါငျးတဈခွမျးတှငျသာ နာကငျြကိုကျခဲတတျပွီး လမျးလြှောကျခွငျးကဲ့သို့သော လှုပျရှားခွငျးပွုလုပျသညျ့အခါ ပိုမိုနာကငျြတတျပါတယျ။ ပြို့အနျခွငျး၊ အလငျး သို့မဟုတျ အသံကို ခံနိုငျရညျမရှိခွငျးတို့လညျး တှဲဖကျဖွဈပျေါနိုငျပါတယျ။
စိတျဖိစီးမှုသကျသကျကွောငျ့တော့ ခေါငျးတဈခွမျးကိုကျခွငျး မဖွဈပျေါစပေမေယျ့ ဖွဈဖို့အလားအလာကိုတော့ မြားစပေါတယျ။
2. ရောဂါတဈခုခုကွောငျ့ ခေါငျးကိုကျခွငျး (Secondary Headaches)
ဦးနှောကျအကြိတျမြားနှငျ့ လဖွေတျခွငျးကွောငျ့ ခေါငျးကိုကျခွငျးဝဒေနာ ခံစားရတတျပါတယျ။ ထိုသို့သော ခေါငျးကိုကျခွငျးမြိုးကတော့ စိတျဖိစီးမှုနဲ့ ဆကျစပျခွငျးမရှိပမေယျ့ စိတျဖိစီးမှုရှိနခြေိနျမြားတှငျ ခေါငျးကိုကျစဖေို့ ပိုအလားအလာမြားတာ တှရေ့ပါတယျ။
3. စိတျဖိစီးမှုကွောငျ့ ခေါငျးကိုကျခွငျး (Tension Headaches)
အရှယျရောကျပွီးသူမြားရဲ့ သုံးပုံတဈပုံတှငျ ဖွဈပျေါလရှေိ့သော ခေါငျးကိုကျခွငျးဟာ စိတျဖိစီးမှုကွောငျ့ဖွဈကွောငျး လလေ့ာခကျြမြားအရ သိရှိရပါတယျ။ စိတျဖိစီးခွငျးဖွဈပျေါပါက ခေါငျးနှဈဖကျအပါအဝငျ နှဖူးနဲ့ဇကျကွောနရောတှငျ တငျးကွပျကိုကျခဲခွငျးကို ခံစားရတတျပါတယျ။ စိတျဖိစီးမှုကွောငျ့ ခေါငျးကိုကျခွငျးဟာ တဈလတှငျ တဈကွိမျ သို့မဟုတျ နှဈကွိမျသာ ဖွဈပျေါလရှေိ့ပွီး နစေ့ဉျလုပျငနျးဆောငျတာမြားကို ပုံမပကျြလုပျဆောငျနိုငျပါတယျ။
>> ခေါငျးကိုကျခွငျးကို ဘယျလိုကာကှယျနိုငျသလဲ?
ခေါငျးကိုကျခွငျးမြားအနကျ စိတျဖိစီးမှုကွောငျ့ ခေါငျးကိုကျခွငျးဟာ အဖွဈမြားဆုံးဖွဈတဲ့အလြောကျ စိတျဖိစီးမှုလြော့နညျးအောငျ ပွုလုပျခွငျးဖွငျ့ ကာကှယျနိုငျပါတယျ။ စိတျဖိစီးမှုလြော့နညျးခွငျးဖွငျ့ ကနျြသော ခေါငျးကိုကျဝဒေနာနှဈမြိုးကိုပါ အထိုကျအလြောကျ ကာကှယျပွီးသား ဖွဈစတောမို့ စိတျဖိစီးမှုမြားနသေူမြားအနဖွေငျ့ ဆရာဝနျနှငျ့ပွသဆှေးနှေးပွီး ကုသမှုခံယူသငျ့ပါတယျ။
တရားထိုငျခွငျး၊ စာအုပျဖတျခွငျး၊ သူငယျခငျြးမြားနှငျ့ တှဆေုံ့ခွငျးစသညျ့ စိတျအပနျးပွစေတေဲ့ နညျးလမျးမြားကို ရှာဖှလေုပျဆောငျခွငျးဖွငျ့လညျး စိတျဖိစီးမှုကွောငျ့ ခေါငျးကိုကျခွငျးကို သကျသာအောငျ ပွုလုပျသငျ့ကွောငျး တငျပွလိုကျပါတယျ။
မနက်ဖြန် စာမေးပွဲ ရှိတယ် ... ညဘက်ထိ စာတွေမရသေးဘူး ... ခေါင်းတွေတောင် ထိုးကိုက်လာပြီ။ ဒီလို စိတ်ဖိစီးမှုတွေ များပြားလာတဲ့အချိန်မှာ ခေါင်းထဲက ထိုးကိုက်လာတတ်တယ်ဆိုပါက သင်တစ်ယောက်တည်း မဟုတ်ပါဘူး။
ဒါဆို စိတ်ဖိစီးမှုနဲ့ ခေါင်းကိုက်ခြင်းက ဆက်စပ်မှုရှိလေသလား? ခေါင်းကိုက်ခြင်းအားလုံးကကော စိတ်ဖိစီးမှုကြောင့်သာ ဖြစ်ပေါ်တတ်လားဆိုတာကို သိရှိချင်ကြမယ် ထင်ပါတယ်။ ဒါကြောင့် အဖြစ်များတဲ့ ခေါင်းကိုက်ခြင်း (၃) မျိုးကို ဖော်ပြပေးလိုက်ပါတယ်။
1. ခေါင်းတစ်ခြမ်းကိုက်ခြင်း (Migraine Headaches)
ခေါင်းတစ်ခြမ်းကိုက်ခြင်းကြောင့် အလွန်ပြင်းထန်သော ခေါင်းကိုက်ဝေဒနာကို ၄ နာရီကနေ ၇၂ နာရီလောက် ခံစားရနိုင်ပါတယ်။ များသောအားဖြင့် ခေါင်းတစ်ခြမ်းတွင်သာ နာကျင်ကိုက်ခဲတတ်ပြီး လမ်းလျှောက်ခြင်းကဲ့သို့သော လှုပ်ရှားခြင်းပြုလုပ်သည့်အခါ ပိုမိုနာကျင်တတ်ပါတယ်။ ပျို့အန်ခြင်း၊ အလင်း သို့မဟုတ် အသံကို ခံနိုင်ရည်မရှိခြင်းတို့လည်း တွဲဖက်ဖြစ်ပေါ်နိုင်ပါတယ်။
စိတ်ဖိစီးမှုသက်သက်ကြောင့်တော့ ခေါင်းတစ်ခြမ်းကိုက်ခြင်း မဖြစ်ပေါ်စေပေမယ့် ဖြစ်ဖို့အလားအလာကိုတော့ များစေပါတယ်။
2. ရောဂါတစ်ခုခုကြောင့် ခေါင်းကိုက်ခြင်း (Secondary Headaches)
ဦးနှောက်အကျိတ်များနှင့် လေဖြတ်ခြင်းကြောင့် ခေါင်းကိုက်ခြင်းဝေဒနာ ခံစားရတတ်ပါတယ်။ ထိုသို့သော ခေါင်းကိုက်ခြင်းမျိုးကတော့ စိတ်ဖိစီးမှုနဲ့ ဆက်စပ်ခြင်းမရှိပေမယ့် စိတ်ဖိစီးမှုရှိနေချိန်များတွင် ခေါင်းကိုက်စေဖို့ ပိုအလားအလာများတာ တွေ့ရပါတယ်။
3. စိတ်ဖိစီးမှုကြောင့် ခေါင်းကိုက်ခြင်း (Tension Headaches)
အရွယ်ရောက်ပြီးသူများရဲ့ သုံးပုံတစ်ပုံတွင် ဖြစ်ပေါ်လေ့ရှိသော ခေါင်းကိုက်ခြင်းဟာ စိတ်ဖိစီးမှုကြောင့်ဖြစ်ကြောင်း လေ့လာချက်များအရ သိရှိရပါတယ်။ စိတ်ဖိစီးခြင်းဖြစ်ပေါ်ပါက ခေါင်းနှစ်ဖက်အပါအဝင် နှဖူးနဲ့ဇက်ကြောနေရာတွင် တင်းကြပ်ကိုက်ခဲခြင်းကို ခံစားရတတ်ပါတယ်။ စိတ်ဖိစီးမှုကြောင့် ခေါင်းကိုက်ခြင်းဟာ တစ်လတွင် တစ်ကြိမ် သို့မဟုတ် နှစ်ကြိမ်သာ ဖြစ်ပေါ်လေ့ရှိပြီး နေ့စဉ်လုပ်ငန်းဆောင်တာများကို ပုံမပျက်လုပ်ဆောင်နိုင်ပါတယ်။
>> ခေါင်းကိုက်ခြင်းကို ဘယ်လိုကာကွယ်နိုင်သလဲ?
ခေါင်းကိုက်ခြင်းများအနက် စိတ်ဖိစီးမှုကြောင့် ခေါင်းကိုက်ခြင်းဟာ အဖြစ်များဆုံးဖြစ်တဲ့အလျောက် စိတ်ဖိစီးမှုလျော့နည်းအောင် ပြုလုပ်ခြင်းဖြင့် ကာကွယ်နိုင်ပါတယ်။ စိတ်ဖိစီးမှုလျော့နည်းခြင်းဖြင့် ကျန်သော ခေါင်းကိုက်ဝေဒနာနှစ်မျိုးကိုပါ အထိုက်အလျောက် ကာကွယ်ပြီးသား ဖြစ်စေတာမို့ စိတ်ဖိစီးမှုများနေသူများအနေဖြင့် ဆရာဝန်နှင့်ပြသဆွေးနွေးပြီး ကုသမှုခံယူသင့်ပါတယ်။
တရားထိုင်ခြင်း၊ စာအုပ်ဖတ်ခြင်း၊ သူငယ်ချင်းများနှင့် တွေ့ဆုံခြင်းစသည့် စိတ်အပန်းပြေစေတဲ့ နည်းလမ်းများကို ရှာဖွေလုပ်ဆောင်ခြင်းဖြင့်လည်း စိတ်ဖိစီးမှုကြောင့် ခေါင်းကိုက်ခြင်းကို သက်သာအောင် ပြုလုပ်သင့်ကြောင်း တင်ပြလိုက်ပါတယ်။